Xiisad Colaad oo laga dareemayo gobolka Jubbada hoose iyo diyaarado Duqeeyey Hoosingow
February 1, 2012 - Written by
Kismaayo:-Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose ayaa sheegaya in saaka dhiiloo colaadeed iyo dhaqdhaqaaq ciidan uu ka jiro deegaanada ay isku horfadhiyaan ciidamada huwanta ah oo ay garab siinayaa ciidamada Kenya iyo Ciidamada Al-Shabaab.
Ciidamada Kenya iyo ciidamada huwanta ah oo taageerayaan ayaa saaka waxay bilaabeen in ay ciidamadooda galiyaan heegan iyaga oo la maqlayo hub ay tijaabinayaan.
Dhanka kale ciidamada Al-Shabaab ayaa difaac iyo diyaargarow ka wada Degmada Afmadow waxaana ay bilaabeen in ay tijaabiyaan gawaarida Tiknikada ah iyaga oo isku diyaarinaya in Difaacaan deegaanada ay duuleeen ku yihiin ciidamada Kenya iyo huwanta la socta .
Deegaanada ay dhaqdhaqaaqa ciidan ka wadaan ciidamada Kenya waxaa ka mid ah deegaanada Qooqaani, Taabto iyo Xayo ee gobolka Jubbada hoose.
Sidoo kale waxaa maanta duhurkii duqeymo u geystay Diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya waxayna duqeeyeen deegaanka Hoosingow ee gobolka J/hoose oo ka mid ah deegaanada ay gacanta ku hayaan Ururka Al-Shabaab .
Ilaa haatan si rasmi ah looma shaacin cida wax ku noqotay Duqeynta ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya kuwaas oo caadeystay in ay bartilmaamsadaan shacabka rayidka ah ee aan ku lug lahay dagaalada .
230,191 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress